Vanhu Vafa neCovid-19 Vasvika Vana muZimbabwe
Vanhu vafa neCoronavirus munyika vave vana zvichitevera kufa kwemumwe munhukadzi muHarare nhasi nechirwere ichi.
Chipatara chafira munhu uyu, cheWest End, chabva chavharwa zvokuti hachisi kutora varwere vatsva.
Gurukota rezvehutano, VaObadiah Moyo, vaudza vatori venhau muHarare, kuti munhu wechina afa nechirwere cheCoronavirus, ashaikira pachipatara che West End muHarare asi anga ari wekuMhondoro.
VaMoyo vati kubva pakasvika murwere uyu pachipatara ichi, vashandi vepo vakaita zvese zvinotarisirwa kudzivirira kutapukirana kwechirwere ichi.
VaMoyo vatiwo chipatara ichi chapfapfaidzwawo mushonga unouraya hutachiona hweCOVID-19, uye chipatara ichi chavharwa senzira yekuona kuti hutachiona uhwu hawutatapuriranwe.
VaMoyo vatiwo pachiri kuitwa tsvagiridzo yekuti mufi uyu akabatwa sei chirwere ichi vachiti chavanongoziva ndechekuti murwere uyu akabva kuMhondoro.
Vatiwo kana vawana ruzivo urwu nyika ichaziviswa. VaMoyo vatiwo bazi rezvehutano ratotanga kuteverera hama dzakanotora murwere uyu kuMhondoro pamwe neavo vakasangana nemufi uyu.
Kunyange hazvo Studio7 isina kukwanisa kubata mhuri yemufi, bepanhau reHerlad rinoti mufi uyu ndiAmbuya Nguni, amai vaVaSlyvester Nguni, avo vaimbove gurukota muhofisi yemutevedzeri wemutungamiri wenyika, Amai Joyce Mujuru.
Zvinonzi chipatara che West End chabva chavharwa zvokuti hachisi kutora varwere vatsva zvichitevera kushaya kwaAmbuya Nguni nechirwere cheCoronavirus pachipatara ichi.
Pasi pemitemo yehurumende, musi anofanirwa kuvigwa nekukurumidza mukati memaawa makumi maviri nemana kubva nguva yaafa.
Vaimbove gurukota rezvehutano muhurumende yemubatanidzwa uye vari munyori wezvehutano muMDC inotungamirirwa naVaNelson Chamisa, Doctor Henry Madzorera, vati zvakakosha kuti vanhu vane chirwere ichi vaende kuzvipatara zvakatarwa kuitira kuchengetedza vamwe varwere vari muzvipatara izvi.
VaMadzorera vatiwo kukwira kwehuwandu hwevarwere veCOVID-19 nendufu munyika mucherechedzo wekuratidza kuti zvinhu zvave kuipa munyika.
Vatiwo hurumende ngaitore mukana uno wekuvharwa kwenyika kuvheneka vanhu vakawanda, kuitira kuti vane chirwere ichi vasasangane neveruzhinji.
Mumagwaro akabudiswa nebazi rezvehutano nezuro, vanhu makumi maviri nevasere vabatwa nechirwere ichi munyika. Bazi rezvehutano rinotiwo vanhu zviuru zvina nezana rine makumi mashanu nevapfumbamwe vakaongororwa hutachiona hweCoronavirus munyika.
Chirwere ichi, icho chakatanga kuChina gore rapera, chabata vanhu vanodarika mamiroyoni maviri nemazana mashanu nemakumi masere ezviuru pasi rose, uye kuuraya vanhu vanodarika zviuru zana nemakumi manomwe nezvisere.